M/weyne Geelle oo dalkiisa dib ugu laabtay kaddib booqasho uu ku tagay Muqdisho. – Radio Daljir
M/weyne Geelle oo dalkiisa dib ugu laabtay kaddib booqasho uu ku tagay Muqdisho.
Muqdisho, Aug 16 – M/weynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dib ugu laabtay dalkiisa kadib markii safar aan horay loo sii shaacin uu magaalada Muqdisho ku tagay maanta isaga iyo wafti uu hoggaaminayey, waxaana uu kulamo la yeeshay madaxda sar sare ee dawladda.
Safarka m/weyne Geelle uu ku tagay magaalada Muqdisho ayaa ku saabsanaa sidii ay dawladdiisu qayb uga noqon lahayd gurmadka gargaar ee loo fidinayo dadka ku barakacay abaaraha daran ee ku dhuftay dhul badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya, sababayna mid ka mid ah barakicii ugu ballaarnaa ee deegaannada Soomaalida ka dhaca.
M/weynaha oo ay waftigiisa ka mid ahaayeen xubno kala duwan oo ka tirsan golayaasha dawladdiisa, ayaa waday sahay gargaar oo aan sidaasi u dhumuc-weynayn iskugana jirtay dawooyin iyo cunnooyin lagu quudiyo dadka nafaqo darradu haleesho.
Md. Geelle, intii uu ku suganaa magaalada Muqdisho waxaa uu booqasho ku tahay xerayaha ay deggan yihiin dadka barakacayaasha ah, isagoo shacabka Soomaliyeed-na uga tacsiyeeyey dhibaatada abaareed ee ku habsatay.
M/weynuhu, dhinaca kale waxaa uu kulamo la qaatay mas?uuliyiinta sar sare ee dawladda sida m/weynaha, R/wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyagoo isku soo qaaday arrimo badan oo ku quseeya labada dal, si gaar ahna iskula lafaguray sidii gacan buuxa loogu fidin lahaa dhibanayaash la il-daran mushkiladda abaareed.
M/weynaha dalka Jabuuti oo ka dagey Muqdisho, lana shirsan M/weyne Shariif
Muqdisho, Aug, 16 – M/weynaha Dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa goor dhawayd ka soo dagay magaalada Muqdisho,halkaas oo ay si diirran ugu soo dhaweeyeen madax Soomaalida oo uu ku jiro M/weyne Shafiir.
Labada M/weyne ayaa hadda shir albaabadu u xiran yihiin ku leh xarunta madaxtooyada ee Villa Somaliya, waxaana ay sheegayaan wariyeyaasha Radio Daljir ee Muqdisho inay madaxweynayaashu ay ka wada hadlayaan sidii dawladda Jabuuti ay kaalin muuqata uga cayaari lahayd nabadaynta Somaliya gaar ahaan Muqdisho.
Waa markii ugu horreysay ee M/weynaha Jabuuti uu yimaado Somaliya, waa dhif iyo naadir in M/weyne dal kale uu yimaado Somaliya arrimaha ammaanka awgood wuxuuna uu ahaa M/weynihii ugu dambeeyey ee Somaliya yimaada M/weynaha Uganda Yuweri Museveni oo ay ciimmo xooggan ay ka joogaan Muqdisho.